Trusty Shops|Eaoron Ceramide solid water
Call us toll free: 09 891221234, 09 891221222
Baby & Kids (125)
Baby Protective Cream & Spray
Beauty & Health (453)
Suncream & Spray
Rubber Sawn Timber
Digital & Mobiles (18)
Phone Covers & Bags
Tablet Covers & Bags
Homes and Living (5)
Internet & Service (6)
Travel & Tour (14)
My Cart 0.00 MMK
Eaoron Ceramide solid water
Merchant: Oz House
Availability: in-stock5item(s)
Product Code: oz0538
မျက်နှာကို ကျန်းမာကြည်လင်စေပြီး စင်ကြယ်တောက်ပစေမှာက Eaoron Ceramide ဖြစ်ပါတယ်။
၄င်းသည် တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှ ရေညှိနှင့် အန္တာတိတ်ရေခဲမြစ်ရေမှ အဓိက ထုတ်လုပ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး ချွေးပေါက်ထဲထိစိမ့်ဝင်နိုင်လို့ စိုပြေမှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ၄င်းကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာလှပတဲ့ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုပုံ - ခေါင်း နည်းနည်းမော့ပါ၊ 15 - 20cm အကွာမှ သန့်ရှင်းသောမျက်နှာပေါ်သို့ ၄င်းကို ဖျန်းပါ၊ စက္ကန့် 20 လောက်စောင့်ပါ အကုန်စုပ်ယူပြီးသည်အထိ၊ ပြီးရင် ၀ါဂွမ်း(သို့) အဝတ်စဖြင့် သုတ်ပါ။ You Will Be Okay!
Highly effective hydrating and repairing treatment made with Antarctic glacier water, formulated with South Pacific Ocean trench algae, ceramide, Bulgaria rose extract, squalene, nicotinamide, hyaluronic acid and botanical ingredients. This product is rapidly absorbed into the skin, purifying and hydrating pores. Resulting inaclearer, brighter and healthier looking skin.
You're reviewing: Eaoron Ceramide solid water
နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် အသားမဲခြောက်သူများ၊ မျက်နှာအသားအရေမညီသူများအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်ပါသည်။
Swisse Manuka Honey Facia ...
Swisse Manuka Honey Facial Mask
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုထားခြင်းမရှိပဲ Vitamin ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါရှိပြီး New Zealand ရှိ Manuka ပျားရည်ဖြင့်ထူးဖော်စပ်ထားပါသည် ။
Natio Ageless Hydrating M ...
Cemoy Hydra Ampoule Face ...
Cemoy Hydra Ampoule Face Mask
မျက်နှာအရေးအကြောင်းများသိသာစွာပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရည်ကြည်လင်စေရန် ရေဓာတ်အဓိကဖြည့်ပေးသည့် Mask
Eaoron Mask Gold
Green tea, Witch hazel and Chamomile အစရှိသည့်သဘာဝပပစ္စည်းများကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အသားအရည်ကိုနူးညံ့စေသည် ။
Cetaphil Foam Wash - Acne ...
Cetaphil Foam Wash - Acne Prone Skin
အဆီများပြီး ဝက်ခြံဖြစ်လွယ်တဲ့ မျက်နှာပြင်အတွက် အဆီပိုများ ဖယ်ရှားပေးပြီး သန့်ရှင်း လန်းဆန်းစေတဲ့ အဆီထိန်း Foam Wash
အသားအရည်သိသာနူးညံ့စေသည့် ပေါင်းတင် mask ။
RAY facial Mask Golden
ဝက်ခြံလည်းပျောက်၊ အသားလည်းဖြူ အစိုဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Eaoron Mask Red
48 နာရီကြာရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး မျက်နှာ V shape ဖြစ်လိုသူများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် Mask
Ladykin Vanpir Dark Repai ...
Merchant: Easy Shop
ထင်းရှူပင်၏အစေးမှ ထုတ်ယူရရှိသည့်အဆီအနှစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့်အရေးအကြောင်းများဖြစ်ပေါ်မှုကို ကာကွယ်တားဆီးပေးပါသည်။
Eaoron Hyaluronic Acid Co ...
Cemoy Marine Boost Collag ...
Cemoy Marine Boost Collagen Face Mask
အမျိုးသမီးများအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် Collagen ဓာတ်ကိုအဓိကဖြည့်တင်းပေးသည့် Mask
Eaoron Mask Purple
အသားအရည်အတွက်အထောက်အကူပြုသည့် သဘာဝပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး 48 နာရီကြာရေဓာတ်ဖြည့်ပေးသည် ။
Eaoron Propolis Facial Ma ...
Eaoron Propolis Facial Mask
နယူးဇီလန်ပျားရည်အပါအဝင် တခြားအလှဆီ ပေါင်းများစွာပါတဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ဖို့ Facial Mask
Choose10 x 8 pcs
Chantelle Facial Mask Pin ...
Chantelle Facial Mask Pink
Chantelle Sheep Placenta Intensive Brightening Facial Mask significantly brightens the complexion and corrects the appearance of uneven skin tone.
JMsolution _ Six kinds of ...
JMsolution _ Six kinds of Mask
JMsolution ရဲ့ Mas (၆)မျိုးဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ Mask အမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်။
Olympic Hotel, National Swimming Pool Compound, U Wisara Road, Dagon Township, Yangon
09 891221234, 09 891221222
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူလူထုသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်
မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသောစည်းကမ်းချက်များ
© 2019 Trusty Shops. All Rights Reserved. | Powered by IGS
09 891221234 / 09 891221222
Trusty Shop Trusty Account :